Ministeerri Barnootaa, barattoota digrii jalqabaatiin eebbifaman ilaalchisee qajeelfama haarawa base. - NuuralHudaa
Ministeerri Barnootaa, barattoota digrii jalqabaatiin eebbifaman ilaalchisee qajeelfama haarawa base.
Last updated Feb 26, 2018 58
Ministeerichi qajeelfama haarawa kana guyyaa hardhaa websaaytii isaa irratti kan maxxanse yoo tahu, barattoonni digrii jalqabaa xumurani kamiyyuu bara barnoota 2011 irraa jalqabee, eebbifamuun duratti qormaata gahumsaa fudhatuu qabu jedha.
Akkasumas Qormaanni gahumsaa fi madaallini keennamu kun barnoota Yuunivarsitii barataa turan, sirritti baratuu isaanii, dandeettii isaanii fi ilaalcha isaanii madaluuf kan gargaruu fi eebbifamtoonnis ofitti amantumma akka qabaatan ni godha jedhamera.
Qajeelfamni kun bara 2011 irraa kaasee hojii irra kan oolu yoo ta’u, barattoonni amma irraa akka of qopheessan beeksiise jira.
May 16, 2022 sa;aa 8:58 pm Update tahe